Sida loo Dayactiro Miisaska Calaamadeysan inay xun yihiin ama Musuqmaasuqa ku jiraan MySQL | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo Dayactiro Miisaska Calaamadeysan inay xun yihiin ama Musuqmaasuqa ku jiraan MySQL
In ka badan hal sano ayaan u adeegsanay plugin-ka Counterizer-ka WordPress-ka oo markaa waxaan haynay tirakoobyada baloogga iyo akhristayaashiisa, qalabkan korantada ah waxaa la joojiyay maalmo ka hor tan iyo (iyo waxyaabo kale) wuxuu keydiyay in ka badan 600MBs oo xog ah oo ku jiray keydka.
Waxay dhacdaa (ka hor inta aan la furin qalabka iyo nadiifinta DB) waxaan isku dayay inaan sameeyo qashin-qubka keydka, taas oo ah, u dhoofi.
mysqldump: Baadi khaldan: 144: Shaxda './dl_database/Counterize_Referers' waxaa loo calaamadeeyay inuu burburay oo dayactirkii ugu dambeeyay (otomaatig ah?) uu ku fashilmay markii la isticmaalayay miisaska qufulka
Sidaa darteed, qashin-qaadka lama fulin oo sifiican ... fikradda kaliya ee laga fikirayo in FromLinux DB ay waxoogaa dhibaato ah soo martay ayaa timahayga istaagay
In yar oo cilmi baaris ah laga sameeyo webka waxaan awooday inaan barto sida loo xaliyo dhibaatadan, sida muuqata MA AH in keydka keydku uu leeyahay dhibaatooyin si sax ah, kaliya miis ayaa loo calaamadeeyay inuu yahay 'dhibaatooyin', nasiib wanaag tani waa mid aad u fudud in la saxo.
Marka hore aan helno server-ka MySQL:
Waxaan riixnaa [Ku qor] oo wuxuu na weydiin doonaa lambarka sirta ah ee MySQL, waan dhigeynaa oo mar labaad ayaan riixnaa [Enter].
Amarkani waa haddii ay dhacdo in server-ka MySQL lagu rakibo isla kombiyuutarka, haddii aad rabto inaad meel fog kula xiriirto server kale oo MySQL ah waa inaad ku dartaa waxyaabaha soo socda qadka: -h IP-EE-ADEEGAHA
Marka aan gudaha u galno MySQL waxaan kuu sheegi doonaa keydka xogta aad isticmaali karto, tusaale ahaan dhibaatada sida ku xusan qaladka kore ku jira miiska Ka-hortagga_Tix-raacayaasha ka keydka macluumaadka dl_dabatabase, si
Oo hadda si loo hagaajiyo saldhigga miiska:
Ogsoonow in dhamaadka xariiqyadan ay jiraan semicolon —– » ;
Mar alla markii amarkii hore la fuliyay, wax walba waa inay caadi ku soo noqdeen, ugu yaraan kiiskeyga sidaas ayey ku dhacday in ka badan hal munaasabad 😉
Markaa waxaa hadhsan oo keliya in dib loogu noqdo tilmaamaha daadinta keydka macluumaadka iyo voila, wax intaa dhaafsiisan.
Sikastaba, waxaan sameeyaa tan in kabadan wax kasta oo kale oo ah xusuus qor ahaan aniga, maxaa yeelay isla waxaas oo kale ayaa igu dhacay laba jeer mana doonayo inaan iloobo tilmaamaha si aan maalinta u badbaadiyo 😀
Salaan kadib waxaanan rajaynayaa inay caawiso qof kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sida loo Dayactiro Miisaska Calaamadeysan inay xun yihiin ama Musuqmaasuqa ku jiraan MySQL
Aad u fiican, marwalba waa inaad haysataa shay noocan oo kale ah oo gacanta kuugu jira sabab kasta ha noqotee.
Haa… xilligan ay dhibaatadu timaaddo, way fiicantahay in xalka gacanta lagu hayo, ama ugu yaraan in la ogaado halka laga helo iyada oo aan dib loo dhigin.
Wanaagsan KZKGGaara. Waxaa jira waxyaabo uusan PHPMyAdmin sameyn karin oo qunsuliyada ay sameyn karto.
Wanaagsan, ayaa i badbaadiyey wax ka badan hal jeer.
Laakiin waxaan la yaabanahay, miyaanay noqon doonin mysql -u xidid -p halkii xidid -u xidid -p? Ulama jeedo inaan xumaan sameeyo.
Laakiin waxaan la yaabanahay, miyaanay noqon doonin mysql -u xidid -p halkii xidid -u xidid -p? Waxaan ku weydiisanayaa aniga oo aan ujeedku ka xumaanayn.
LOL !!!! Gebi ahaanba run, qaladkeyga LOL!
Waxaan qori jiray oo aan ka fikirayay talaabo horay usocota, halkaas oo aan ku qoro xidid halkii aan ka dhigi lahaa mysql ... Waad ku mahadsantahay digniinta 🙂
Adaa mudan! Waan ka xumahay qoraalka laba-laabka ah; Waxaan isku dayay inaan soo diro si isdaba joog ah waxayna ii sheegtay inay hore u jirtay (dib ayaan u dajiyay bogga waxbana ma arag).
Tani waxay ka soo baxeysaa timahayga hadda markaan galayo arrinta DB.
Hal su'aal, intee jeer ayaad DB daadisaa? waa in la ogaado inta ay qaadaneyso in la helo illaa 600MB oo xog ah
Ehm… Sifiican ayaan kuu fahmin hada 🙂
Kahor intaanan nadaafad ka sameynin FromLinux DB (taasi waa, .sql ee DB) ayaa culeyskeedu ka badnaa 700MB, maxaa yeelay waxaan badbaadinay dhammaan tirakoobyada ku jira DB. Si kale haddii loo dhigo, laga bilaabo bilowga barta.
Hadda waxaan isticmaaleynaa Google A. sidaa darteed waxaan ka tirtireynaa miisaska tirakoobka DB, oo hadda .sql ma gaaro 80MB
Tani ma ka jawaabaysaa su'aashaada?
Trollh la'aan, intee jeer ayaad DB daadisaa?
Dhowr jeer bishii 🙂
Marwalba waxaan iskudayaa inaan lahaado nooca ugu dambeeya ee DesdeLinux ee kuyaala deegaankeyga
waad jeceshahay iibso !! dijo
Waxay ila egtahay aniga ok, hadda suurtagal maahan in dib u eegis guud lagu sameeyo miisaska musuqmaasuqay?
Jawab adigu sidaad u iibsatay !!
Aad baad u mahadsantahay saaxiib, waxtarkaagu wax badan buu i taray.
Aad baad u mahadsantahay gacaliye, waad ku mahadsan tahay talooyinka, way i caawiyeen !!
Salaan ka timid Trujillo-Venezuela.
Jawaab Juan Mollega
Sidaan ogahay haddii howshu socoto waxaan qorey miiska hagaajinta miiska soo dejinta; halkaasna waan joogaa
Ku jawaab hernan barra
Aad baad u mahadsantahay, waad badbaadisay maqaarkayga 😀
Ku jawaab Andre Cruz
Saaxiib salaan, ma ogi haddii aad i caawin kartid, wax la mid ah ayaa ku dhacay degelkeyga, calaamadee qaladkan:
Miiska wp_posts sax maahan. Ka warbixi qaladka soo socda: Jadwalka waxaa lagu calaamadeeyay inuu burburay oo dayactirkii ugu dambeeyay uu ku fashilmay. WordPress wuxuu isku dayi doonaa inuu hagaajiyo miiskan ...
Ku guuldareystay inuu hagaajiyo miiska wp_posts. Cilad: Jadwalka waxaa lagu calaamadeeyay inuu burburay oo dayactirkii ugu dambeeyay uu ku fashilmay
Ma aqaano inaad iga caawin kartid hagaajinta, waxaan ku cusubahay WordPress horumarsan. Markaad isku dayeyso inaad hagaajiso miiska wp-post, waxay muujineysaa qalad aan la hagaajin karin. Mahadsanid. Boggeygu waa: https://diarionoticiasweb.com
Icedove: iimayl u dir macmiilka ka caawiya hagaajinta wax soosaarka shaqada